चन्द्रमा किन खुम्चिँदैछ ? यस्तो छ कारण - Gokarna News from Nepal
चन्द्रमा किन खुम्चिँदैछ ? यस्तो छ कारण
एजेन्सी– तपाईं हामीले बाल्यकालदेखि नै चन्द्रमाको बारेमा धेरै कथाहरु सुनेकै छौं । रुप फेरिरहने चम्किलो चन्द्रमाका कथाले हामी पुलकित हुन्थ्यौं । तर यो चम्किलो चन्द्रमा अहिले चाहिँ मुर्झाउँदै गएको छ ।
नासाले खिचेका चन्द्रमाका हजारौं तस्वीरहरुको विश्लेषण गरी यस्तो ठहर गरिएको हो । लुनर रिकनिसेन्स अर्बिटरले खिचेका १२ हजारभन्दा धेरै तस्वीरको विश्लेषण गरिएको थियो । अध्ययन अनुसार चन्द्रमाको उत्तरी ध्रुवस्थि चन्द्र बेसिन मारे फ्रिगोरिसमा दरार पैदा भैरहेको छ । यतिमात्र होइन, त्यो ठाउँ भासिँदै गएको छ ।
फेसबुकले ल्याउने भयो भिडियो कलमा नयाँ सेवा “म्यासेन्जर रुम”